Marc Ravalomanana Mihetsiketsika any Alaotra Mangoro
Nitohy tany Alaotra Mangoro ny fanetsehana ny mpikambana sy fanavaozana ny biraom-paritry ny antoko Tiako i Madagasikara, taorian�ny kongresy nasionaly tamin�ny mey 2015, ka nandraisan�Atoa Marc Ravalomanana ny fitantanana ny antoko.
Tany Amparafaravola izy omaly nametraka ny filohan'ny mpitantana ny Tiako i Madagasikara ao amin'ny Faritra Alaotra Mangoro mifehy ny Distrika efatra, dia Ambatondrazaka, Amparafaravola, Andilamena ary Moramanga. Ramanotronarison Charles Emile no lany tamin’izany, hiasa sy handray andraikitra avy hatrany amin’ny fanetsehana ny mpikambana ifotony, hiatrika ny fifidianana isan’ambaratonga indrindra ny fifidianana filoham-pirenena ho avy. Nanatrika ny faha-20 taonan’ny Synodam-paritany Alaotra Chrome ihany koa Atoa Marc Ravalomanana nandritra ity diany tany Amparafaravola omaly ity, nanentana ny mpino Fjkm ny tenany fa zava-dehibe ny tsangam-bato hanamarihana ny faha-50 taonan’ny Fjkm dia ny fananganana fotodrafitrasa maoderna eny amin’ny Kolejy Teolojika Ivato, asa vitaina ato anatin’ny 22 volana. Izy moa, tsiahivina ihany, no filohan’ny komity jobily faha-50 taonan’ny FJKM. Tsy adinon’i Dada ny nihaona sy nifampiresaka tamin’ireo olona sendra azy teny an-dalana teny, tahaka ny tao Andaingo Gara ohatra. Na tsy nisy aza ny fiomanana sy fampilazana mialoha dia vory marobe tampoka ny olona vantany vao nandre fa mandalo ao an-tanàna Ravalomanana. Na ireo ankizy aza dia efa mahay tsianjery io anarana io ary samy te hahita sy handray tanana an’i Dada. Ireo olon-dehibe moa dia afaka niresaka kely sy nifanakalo hevitra taminy ary samy nahatsapa fa tena mbola hafa ihany i Dada, mora mifandray sy mifankahazo amin’ny vahoaka.